Xaflad lagu dhaarinayo gudiyada tartanka SBC iyo xaafadaha oo xalay ka dhacday xarunta SBC – SBC
Xaflad lagu dhaarinayo gudiyada tartanka SBC iyo xaafadaha oo xalay ka dhacday xarunta SBC
Posted by editor on Julaay 31, 2011 Comments
Xaflad dhaar ahayd oo lagu dhaarinayay wakiilada xaafadaha tartanka ka qayb galaya iyo gudiga barnaamijka ayaa xaklay ka dhacaday xarunta idaacada SBC Bosaso waxaana dhaartu ay u dhacday sidii loogu talagalay.
Ugy horeyn waxaa la dhaariyay gudiyadii ka socday xaafadaha tartanka, waxayna ku dhaarteen xaafad walba in si daacad ah ay uga qayb galayaan tartanka iyo in ay iska ilaalinayaan wixii wax u dhimi kara habsami u socodka barnaamijka .
Intaas ka dib waxaa gudiyadii xaafadaha hortooda lagu dhaariyay gudiga tartanka SBC waxayna ku dhaatreen in barnaamijka ay u qaban doonaan si daacad ay ku jirto si xaafadaha loogu caadalad sameeyo .
Xaflada dhaarinta kadib ayaa waxaa kalmado la siiyay qaar kamid ah xaafadihii waxayna sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin sida ay wax u dhaceen waxayna sheegeen in dhaartu ay tahay wax loo baahnaa si meesha ay u timaado cadaalada iyo is aaminaad .
Waxaa isna goobta ka hadlay Maxe’d Dek Abdalla oo ah agaasimaha I daacada SBC waxana uu sheegay sababaha keentay dhaarta ay tahay is lays aamino shakigana lats kasaaro .
Ugu dambayntii waxaa xaflada ka hadlay Sh. Liibaan Mashruuc oo ah gudoomiyaha gudiga garsoorka tartanka waxana uu kula dardaarmay dhamaan xaafadaha in ay si wanaagsan uga qayb qaaraan oo ay muujiyaan dadaalkooda ku aadan ka qayb galka tartanka .
Xasan Cabdi Farey Gantleman
Agoosto 1, 2011 at 9:53 am
Sbc isku aadkii meeyey waa maxay xiligan dhaartu